Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Influenza vaccine တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး
Influenza vaccine တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး
ဆရာရှင့် တစ်နှစ်ခွဲ ကလေးကို တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါသလားရှင့်။ ဆေးထိုးလိုက်ရင် ဖျားနာတာ ဖြစ်တတ်ပါလား။
တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးဟာ တခြားကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့မတူပါ။ တရာသီခံဆေးသာဖြစ်တယ်။ ထိုးဆေးကို Flu shot လဲခေါ်တယ်။ Nasal spray နှာခေါင်းထဲပန်းတဲ့ဆေးလဲရှိတယ်။ မထိုးမနေရကာကွယ်ဆေးမဟုတ်ပါ။
အမေရိကားမှာ အသက် ၆ လအထက်ကိုသာထိုးတယ်။ WHO သတ်မှတ်ချက်ကတော့ အသက်ကြီး-နာမကျန်းသူတွေ၊ နာတာရှည်ရောဂါသည်တွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ ၆ လကနေ ၂ နှစ်အထိကလေးတွေ။
အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလေးတွေကို live attenuated vaccine ထိုဆေးထိုးဘို့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ inactivated vaccines အမျိုးအစားဆိုရင် တိတိကျကျပြောမရသေးပါ။ HIV ရှိနေသူတွေကို ထိုးစေတယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ၂-၄ ပါတ်နေရင် ခုခံနိုင်စွမ်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်။ ၆ လ နောက်မှာကျလာတယ်။ ၂-၃ နှစ် လောက်အထိ တန်းနေတယ်။
Flu vaccines ဆေးတွေကတော့ -
1. TIV, QIV (injection of trivalent or quadrivalent, killed vaccine) နဲ့
2. LAIV, Q/LAIV (nasal spray of live attenuated influenza vaccine) ဖြစ်တယ်။
ဆေးထိုးလိုက်ရင် နှာရည်ယိုတယ်၊ လည်ချောင်းနာတာ၊ ကြက်ဥနဲ့မတည့်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆေးဈေးနဲ့ ထိရောက်မှု အကောင်း-အဆိုး ငြင်းနေကြတုံးဘဲ။
အမေရိကားမှာ live attenuated virus (nasal spray) နှာခေါင်းပန်းဆေးကို ဒီလိုလူတွေကို မသုံးဘို့ အကြံပေးထားတယ်။
• ၂ နှစ်အောက်ကလေးတွေ၊
• အသက် ၅ဝ ကျော်သူတွေ၊
• ကလေးတွေမှာ aspirin ဆေးပေးနေရသူတွေ၊
• နှလုံး၊ အဆုပ်၊ ကျောက်ကပ်၊ အသဲ၊ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြော၊ သွေးရောဂါရှိနေသူတွေ၊
• HIV ရှိသူတွေနဲ့